warkii.com » Kangana Ranaut oo afka furatay markale iyadoo ku gooddisay inay soo celineyso billaddeeda Padma Shri sabab la xiriirta geeridii Sushant Singh Rajput
Kangana Ranaut oo afka furatay markale iyadoo ku gooddisay inay soo celineyso billaddeeda Padma Shri sabab la xiriirta geeridii Sushant Singh Rajput
Atariishada hadallada kulul ku caan baxday ee Kangana Ranaut ayaa afka furatay mar kale iyadoo si gambasho la’aan ah kaga hadashay geeridii ku timid jilaagii is dilay ee Sushant Singh Rajput.
Kangana ayaa ku eedeysay geerida Sushant shaqsiyaad laga sharfo Bollywood-ka iyo qolada ay ugu yeertay burcadda filimada inay ka dambeeyeen inuu is dilo.
Atariishadan ayaa soo bandhigeysay muuqaallo iyadoo ka sheekeyneysa sida maskaxda iyo qalbiga loogaga cuuryaamiyo jilaayaasha ku cusub filimada ee aan dhaxaltooyada ku imaanin.
Waxay sidoo kale su’aal ka keentay in Sushan Sing Rajput uu is dilay iyo in dilkiisa la qorsheeyay, iyadoo ku nuux-nuuxsatay in xiddiga geeriyooday uu rajo wacan ka qabay filimkiisa dhawaan la daawan doono ee Dil Bechara, hammi sarena uu lahaa.
Kangana ayaa xitaa weerar ku qaadday saxaafadda oo ay ku tilmaamtay inay indhaha iska xirayaan.
Xiddigtay iyadoo la hadleysa Republic TV ayaa sheegtay inay iska soo celineyso billaddeeda Padma Shri, haddiiba mar aysan awoodin inay caddeyso hadalkeeda ku aaddan dhimashadii Sushant, xilli ay dhanka kale caddeysay inay booliska Mumbai u yeereen.
“Way ii yeereen, anigana waxaan u sheegay inaan joogo Manali, sidaas darteed ay iisoo diraan cid su’aalaha i weydiisa, balse ma aanan helin qof ii timaadda markaas kaddib” ayay tiri Kangana.
“Waxaan idiin sheegayaa, haddii aan wax dhahay oo aanan caddeyn karin, waxaan soo celinayaa billaddeyda Padma Shri.
“Uma qalmo billadda. Ma ihi qof wax walba sheegi kara, wax walba oo aan dhahana waa wax ay shacabku leeyihiin” ayay hadalkeeda ku dartay.
Kangana ayaa sidoo kale xustay magacyada afar shaqsi oo ka tirsan Bollywood-ka kuwaasoo aanan wali su’aalo loogu yeerin, waxaana ay afartaas qof ku tilmaamtay Aditya Chopra, Mahesh Bhatt, Karan Johar iyo Rajeev Masand kuwaasoo ay ku sheegtay inay ahayd in booliska ay u yeeraan si ay su’aalo u weydiiyaan.
Sushanta ayaa geeriyooday 14-kii bishii tagtay, isagoo isku dilay xaafadda uu deggan yahay ee Bandra sida ay booliska sheegeen.